မှန်ကန်ဖို့တော့ လိုပါသည် …… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Letter to The Editor » မှန်ကန်ဖို့တော့ လိုပါသည် ……
မှန်ကန်ဖို့တော့ လိုပါသည် ……
Posted by မှော်ဆရာ on Oct 5, 2011 in Letter to The Editor | 18 comments
မြှောက်ပေးတာတော့ မဟုတ်ပါ .။မန္တလေးဂဇက် အရှိန်အ၀ါကြီးနေသည်။ ဘာလို့ဆိုတော့ ဒီရွာက အပိတ်အဆို့မရှိ ၀င်ထွက်နှိုင်တာ (ကျော်စရာ ခွစရာ မလိုတာ ) ရွာထဲမှာ အတတ်ပညာရှင်ပေါင်းစုံ လူတန်းစားပေါင်းစုံ ၇ှိနေတာ ၊ ကွန်မန့်ဖြင့် အပြန်အလှန် ထိမ်းချုပ်နေကြတော့ အတည်အခံ့ စာတွေပဲ ရှိနေတာကိုက အားသာချက်ဖြစ်နေသည်။
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်လောက်က ကျွန်တော်တို့မြို့က ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်၇ဲ့ လာဘ်စားမှုသတင်း တိုင်စာတစ်စောင် မန္တလေး ဂဇက်ပေါ်တက်လာသည်။ တိုက်ရိုက်ရေးတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး ၊တခြားလူသိနဲသေးတဲ့ ကျော်ခွရတဲ့သတင်းဝက်ဆိုက်ကနေ ရွာထဲကတစ်ယောက် ကူးယူလာတာပါ.။တိုင်စာကလဲ တော်တော် တိတိကျကျ အပြည့်အစုံကို ရေးထားတာပါ။ ဒါကြောင့် ဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ မြို့မှာ တော်တော် လှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ် ဖြစ်သွားတယ်။ သတင်းထဲမှာ ပါတဲ့သူကတော့ ပထမတော့ ခပ်ပေါ့ပေါ့ ပဲပေါ့။ နောက်တော့ ဗဟိုက စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ ဆင်းလာတယ် ။ အတိုချုပ်ပြောရရင် ရာထူးပြုတ် ထောင်တစ်နှစ်ကျသွားတယ်.
ဒါဘာကို ပြသလဲဆိုတော့ ဒီဝက်ဆိုက်အပေါ် အထက်က အာရုံစူးစိုက်မှုရှိတယ် ဆိုတာကိုပါ။မတရားတဲ့ကိစ္စလေးတွေ တတ်နှိုင်သလောက် ပြင်ဆင်ခွင့်ရှိသွားတယ်ပေါ့လေ
အခုတစ်လောလဲ တိုင်စာ၊ တင်ပြစာလေးတွေ တော်တော်များများ ရွာထဲကိုေ၇ာက်လာပါတယ်။ဒီလိုဆိုတော့ ကျွန်တော် ဘာကိုစိုးရိမ်လာသလဲဆိုတော့ ရွာ့ အဆင့်အတန်း ကျသွားမှာကို စိုးရိမ်လာရပါတယ်။ တင်တဲ့တိုင်စာလေးတွေမှာ မမှန်ကန်တာ ၊ မတိကျတာ တွေ ပါဝင်လာခဲ့လို့ရှိရင် ဒီဝက်ဆိုက်က မမှန်သတင်းတွေ တင်နေတာပါလို့ မြင်သွားလို့ရှိရင် အမှန်အကန်တွေပါ ရောပြီး နစ်နာမှာ စိုးရပါတယ်။
မနေ့တနေ့ကတောင် အင်တာနက်က မြန်တော့ မြန်တယ် ၊ တိကျမှုအားနည်းတယ်လို့ ထောက်ပြထားတဲ့ ပိုစ်တစ်ခု ဖတ်လိုက်မိပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ဒါ မသေမချာ မရေမရာနဲ့ ရေးလိုက်တဲ့ သူတွေကြောင့် အကုန်လုံးထိခိုက်ရတာပါ ။
မတရားလုပ်တာကို မုန်းတီးတဲ့ သူဆိုတာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလဲ မတရားမလုပ်ရပါဘူး။
ဒါကြောင့် မှန်ကန်ဖို့တော့ လိုပါတယ်…
မန္တလေးဂဇက် ဆက်လက်တိုးတက်ပါစေ …
တိကျ၊ ရေရာ၊ သေချာ သည်များကို စုစည်းတင်ပြသည်ဆိုတဲ့
သူကြီးနဲ့ ၀ါရင့် ရွာသူရွာသားကြီးတွေက
ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုပြီး လွှတ်ထားမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့လို ရွာသားစစ်စစ်ကြီးမဟုတ်သေးတဲ့ လူတွေကလည်း
၀ိုင်းဝန်းတည့်မတ်ပေးဘို့ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ခံယူပါတယ် မှော်ဆရာရေ။
တိုင်စာရေးရင် တိတိကျကျနဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန်ရေးမှ မန်းဂေဇက် ရဲ့ အရှိန်အ၀ါကောင်းကို
ထိမ်းထားလို့ရမယ် ထင်ပါတယ် ….
တင်ကြတဲ့ အကြောင်းအရာတွေထဲမှာ မမှန်ကန်တာပါရင် သိတဲ့လူက (ရွာထဲမှာ လူများတော့ တစ်ယောက်ယောက်က သိနေနိုင်ပါတယ်။) တည့်တည့်မတ်မတ်လေး ပြန်လှန်ချေပပေးခြင်းဖြင့် ရပ်ရွာအကျိုးသယ်ပိုးကြမယ်ဆိုရင်တော့ …………..
အတိုင်းထက်အလွန်၊ တံခွန်ထက် ကုက္ကား ဖြစ်သွားမှာပေ့ါနော်။
မယက ၊ ရဲ စသည်တို့မှာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အင်တာနက် ကိုသေချာစောင့်ကြည့်ပြီး ကိုယ့်မြို့သတင်း တိုင်စာပါလာလို့ရှိရင် ချက်ချင်း အထက်ကို တင်ပြရပါတယ်။
သူတို့အခေါ်အဝေါ် မမှန်သတင်း (သို့) ကောလဟာလ သတင်းလို့ သုံးနှုန်းပါတယ် .
အောက်က အရင် မသိပဲ အထက်က အရင်အမေးခံရင်တော့ သူတို့ အထုခံရပါတယ်။
ရေးတဲ့သူက သေချာ တိတိကျကျ မရေးရင်တော့ မဟုတ်ပါ ၊ မမှန်ပါ ဆိုပြီး သတင်းမှား ကောလဟာလဆိုပြီး အထက်ကို တင်ပြပါတယ်။
တကယ်ကို တိတိကျကျရေးထားတယ်ဆိုရင် အပေါ်က မပြောခင် အရေးယူပြီးတော့ အရေးယူပြီးစီး ဆိုပြီး တင်ရပါတယ်။
အရင်ကတော့ bbc / DVB / Mizzima စသည်ဖြင့် ကြည့်ရတယ် ။ အခုတော့ ဂေဇက်ပါ မေ့ထားလို့ မရတဲ့ အထဲ ပါလာပါပြီ.။ဒါကြောင့် မဟုတ်ပဲလဲ မရေးစေချင်ပါ ။ သိပ်မသေချာပဲလဲ မရေးစေချင်ပါ ။ သူတစ်ပါးအကျိုး ပျက်စီးစေလိုသော စိတ်နဲ့လဲ မရေးစေချင်ပါ ။ အမှန်တကယ်ကို တရားလွန်မှသာ သေသေချာချာ တိတိကျကျ ရေးစေလိုပါတယ် ။ကျန်တဲ့သူတွေကလဲ အမြင်မတော်ရင် ၀ိုင်းထိန်းပေးကြပါ။
ဒီလို ဒီလို တွေ ရှိလာတာ သိရတယ်
ဒါဟာ ကောင်းသော အလုပ် ၊ ကောင်းသောလုပ်ရပ် ပဲ မို့ 
သဘောကျ ဝမ်းသာ ကျေနပ်မိပါတယ်
မန်းတလေး ဂေဇက် အဓွံရှည်ကြာညောင်း
အောင်မြင်မှုတွေ ဒီထက် အဆတစ်ရာမက ဆီသို့ 
ပြည်သူအသံ၊ပြည်သူ့မီဒီယာ မှန်ကန်သောတွေးခေါ်၊မှန်ကန်သောသတင်းတွေကို ဖေါ်ပြပေးနိုင်တဲ့ လူမူရေးဝက်ဆိုဒ်တွေဟာ အစိုးရရဲ့ သတိထားစောင့်ကြည့်မူကိုခံရမှာပဲ။မှန်ရာကို ရဲရဲပြောရဲရမယ်၊တင်ပြရဲရမယ်၊အကျိုးအကြောင်းခိုင်လုံမူရှိရမယ်ဆိုရင် အားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမှာပဲ။
ကောင်းတယ် ကိုကိုယ်တိုင် သိတာ မြင်တာရေးတယ်ဆိုရင် ပိုထိရောက်တာပေါ့နော်။
ဒီ post နဲ့တော့ မဆိုင်ပေမဲ့ ကိုကိုယ်တိုင် သိတာ မြင်တာရေးဆိုလို့
လွန်ခဲ့သော တလလောက် က passport ထုတ်ပေးတဲ့ ကောင်တာ ရှေ့ ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ထုတ်တဲ့ သူတိုင်း တစ်အုပ် တစ်ထောင်ပေးကြပါတယ်။ သူကတော့ တောင်းတာမတွေ့ရပေမဲ့ မပေးမနေရလိုဖြစ်ပြီးပေးကြလားတော့မသိပါ။
လက်ဗွေနှိပ် ဆိုင်းထိုးတဲ့ သူတိုင်းလည်း တစ်ထောင်ထုတ်ပေးရပါတယ်။ သူကတော့ မပေးရင် လက်ညိုးတစ်ချောင်း ထောင်ပြပါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ ထုတ်ပေးကြရတာ တွေ့ခဲ့ပါတယ်။
အခု အဲ့ဒီ့ အကျင့် ရှိ သေးလား ပေးရသေးလားတော့မသိပါ။
ွှအဲ့ဒီ့ရက်နဲ့ သိပ်မခြား တဲ့ ရက်မှာဘဲ မြို့တော်ခန်းမ မြေအမည်ပြောင်းနေရာ ရောက်တော့ ဘယ်သူမှပိုက်ဆံ မယူရဲတော့ပါဘူး ။ ပေးမလို့ လုပ်သူတွေကို cctv တပ်ထားတယ် . မပေးနဲ့ဆိုပြီး ၀န်ထမ်းတွေက သတိပေး ပါတယ်။
မနေ့တနေ့ကတောင် အင်တာနက်က မြန်တော့ မြန်တယ် ၊ တိကျမှုအားနည်းတယ်လို့ ထောက်ပြထားတဲ့ ပိုစ်တစ်ခု ဖတ်လိုက်မိပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ဒါ မသေမချာ မရေမရာနဲ့ ရေးလိုက်တဲ့ သူတွေကြောင့် အကုန်လုံးထိခိုက်ရတာပါ ။
ဒီဆိုက်က တခြား ဆိုက်များနဲ့ မတူပဲ မီဒီယာတွေရဲ့ မျက်စိကျ အာရုံစိုက်ခံရတာကိုလည်း သိရပါတယ် … တစ်ချို့ ပြည်တွင်း မီဒီယာလုပ်ငန်းတွေကတောင် ဒီဆိုက်ကို စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွင့်ထားပြီး … ပို့စ်တစ်ခုဝင်လာတိုင်းဖတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလည်း သိရတယ် … ။ ပြည်ပအခြေစိုက် သတင်းဌာနဖြစ်တဲ့ … DVB ကလည်း ဒီဆိုက်ထဲက တချို့ ပို့စ်တွေကို အလျဉ်းသင့်သလို ဖတ်ပြသွားတာတွေလည်း …မြင်တွေ့ခဲ့ဖူးပါတယ် … ။ ဆိုက်ထဲမှာရေးတဲ့ ကျွန်မပို့စ်တစ်ပုဒ်နဲ့ ပတ်သတ်လို့ … အနာပေါ် ဒုတ်ကျသွားတဲ့ လူတွေကတော့ .. အရေခွံ စုတ်ပစ်ချင်လို့ …. လိုက်ရှာနေပါသတဲ့လေ ….
ကောင်းပါ ရွာထဲက သတင်းတွေကို အရေးတယူ ဖတ်သူများ ရှိနေတော့ ရေးသူများ ပိုအားတက်ရတာပေါ့။ ရွာသားများကလည်း တတ်နိုင်သလောက် စေတနာထား ရေးစေချင်ပါတယ်။ အတိအကျ မဖော်ပြနိုင်တာမျိုး ကျတော့လည်း ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မလဲ။ ရေးသူ၊ အရေးခံရသူတွေရဲ့ အနေအထားကိုလည်း ကြည့်ရသေးတာကိုး။ ဥပမာ – သဂျီးတလတလကို ဒေါ်လာငါးထောင် အန်ကယ်ဆမ်ဆိုတဲ့ လူဆီကနေ ငွေသားနဲ့ရနေတာမျိုးဆိုရင် သူ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖြစ်လို့ မရေးသင့်ပါဘူး။
အိတုံရေ လုံအောင်သာပုန်းနေပေတော့နော် တွေ့သွားမှဖြင့် အရေခွံစုတ်ခံနေရမှာ စိုးရိမ်မိလို့ပါ
ရွာသားကြီးတွေ ကိုယ့်ရွာအပေါ်မှာထားတဲ့ စေတနာကို မြင်ရတာ တစ်ကယ်ကြည်နူးမိပါတယ်ဗျာ။
ကျွန်တော်က ဒီရွာနဲ့ ထိတွေ့လာတာ၊ ဗဟုသုတမျိုးစုံ ရယူလာခဲ့တာ ကာလနှစ်ချီ ရှိလာခဲ့ပေမယ့် အခြေအနေအမျိုးမျိုးအရ post မတင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး၊
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်က ဘက်စုံအခြေအနေလေးပေးတာနှဲ့၊ ကိုယ်ကလည်း ရွာသားကြီးတွေကို အားကျလာခဲ့တာမို့၊ ပို့တင်ရင်လည်း ရွာကြီးကို လေးစားမှုနဲ့ စာလေးတစ်လုံး အကျိုးမပြုရင်တောင် အနောက်အယှက် မဖြစ်စေဖို့ ကိုယ်ဖြတ်သန်းသွားနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်နေတာလေးကို မန္တလေး၊ ၁၈ လမ်း ပြည်သူများ ဒုက္ခဆိုပြီး post လေးတစ်ခု တင်ခဲ့ပါတယ်။ စတင်တဲ့ post က တိုင်စာလို ဖြစ်သွားရတာက ရေးစရာလေး စဉ်းစားချိန်မှာ အဆိုးဆုံးဖြစ်နေချိန်နဲ့လည်း တိုက်ဆိုင်သွားလို့ရယ်၊ ရွာရဲ့ အရှိန်အဝါကို တန်ဖိုးထားလို့ရယ်ကြောင့်ပါ။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကတော့ မှော်ဆရာ ပြောပြသလိုပါပဲ ၃ရက်အတွင်းမှာ အဲဒီ ခေါက်ဆွဲဖိုက လူတွေနဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေ ပေါင်းပြီး သန့်ရှင်းရေး လုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် Post ရေးတဲ့သူတွေဖက်က သေချာ တိတိကျကျနဲ့ သေသေချာချာ ရေးဖို့ကို အလေးအနက် လက်တွေ့နဲ့ယှဉ်ပြီး ထောက်ခံပါတယ်ဗျာ။
ရွာကြီး အဓွံရှည်ကြာညောင်းကာ အောင်မြင်မှုအပေါင်း ဒီထက် အဆတစ်ရာမက ခညောင်းနိုင်ပါစေ။
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်က.. နိုင်ငံခြားနေမြန်မာတွေနဲ့.. ပြည်တွင်းနေမြန်မာတွေကြား. .ပေါင်းကူးဆက်ဆံနိုင်ဖို့အဓိကရည်ရွယ်တည်ဆောက်ထားတာပါ..။
ဆိုတော့.. တကယ့်မြန်မာတွေစိတ်ဓါတ်တွေ.. လူတန်းစားအလွှာအသီးသီးမှာ..ဘာတွေခံစားဖြစ်နေကြသလဲ .. သိချင်ရင်..ကိုးကားလေ့လာနိုင်တာပေါ့…။
မြန်မာ့အရေးစိတ်ဝင်စားသူတိုင်း.. မြန်မာကိုသိလိုသူတိုင်း.. လေ့လာနိုင်တာပေါ့..။
ဥပဒေပြုသူတွေ.. အင်မတန်ကိုလေ့လာဖတ်ရှု့ သင့်တယ်လို့..ထင်တာပါပဲ.။
မြန်မာ Officials တွေတင်မက.. ယူအက်စ်သံရုံးအပါအ၀င်..ယူအက်စ်အစိုးရ Officials တွေလည်း.. ဖတ်ရှု့ လေ့လာကြတယ်လို့.. ထင်ပါတယ်..
အဲဒီတော့.. ဒို့ရွာသားတွေ.. ရေးတင်သမျှတွေ.. ကိုယ့်စာကိုယ်.. ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူကြဖို့ပါပဲ..။ မှန်ကန်ဖို့လည်း သတိပြုကြစေလိုတာပါ..။
ထုံးစံအတိုင်း..ထပ်ပြောရရင်.. ကျုပ်အနေနဲ့ကတော့.. စာနယ်ဇင်းသမားစည်းကမ်းအတိုင်း.. အယ်ဒီတာစည်းကမ်းအတိုင်းပေါ့..။
ရွာသားတွေ..ဘယ်သူက.. ဘယ်သူတွေလည်း.. ငွေဘယ်လောက်ပွိုင့်ဘယ်လောက်ရကြပြီလည်း.. ဘယ်နယ်ကလည်း..
MG က ပြည်သူ့ရင်ပြင်ကြီးလိုပါပဲ။ အရင်က အောက်ခြေမှာ မတရားခံရတာတွေ ရှိရင် အထက်ရောက်အောင် တင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပဲ လမ်းတ၀က်မှာတင် လက်စပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။ အခုတော့ ပြည်သူတွေဟာ တရားဥပဒေအရ အကာအကွယ် အပြည့်ရမှာဖြစ်လို့ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုပါတယ်။ ဥပဒေကိုလည်း ယုံရဲ တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
မှော်ဆရာပြောတာကို ထောက်ခံပါတယ်။ ကျမတို့ အားလုံးသတိထားကြရမှာပါ။